1 Kungani Abanye Abakwa-stillinger Beya Viral?
2.3 I-3 – I-overskrifter-materie
Kungani Abanye Abakwa-stillinger Beya Viral?
Kulesi sihloko, usebenzisa isibonelo sesayithi Kuyafaneleka, okugxila kumavidiyo. Umqondo wonke wesayithi unomlayezo omuhle ongenayo futhi zonke izihloko zenzelwe ukuvusa uhlobo oluthile lomzwelo kumfundi futhi ngoba abafundi babelane ngalawo mavidiyo, isayithi manje linamakholi angapidizu kai.
Iziphi Izinkampani Ezithenga Ukukhethwa? Ibalazwe le-stat-by-stat Maphepha.
Owesifazane Okhulelwe Ufunda Umntwana Wakhe Une-Down syndrom. Abantu Abanakho Bawuphendula Umbuzo Omkhulu.
I yokuqala nokulula ongayenza ukusiza okuthunyelwe kwakho ukuhamba nge-viral ukwenza kube lula kubafundi bakho ukuthi babelane ngalokhu okuthunyelwe.
I-3 – I-overskrifter-materie
UJerry Low wabhala isihloko esithi "Bhala izinhloko ezifana noBrian Clark, Neil Patel, noJon Morrow: Amasampula aphezulu we-35 kusuka ku-Blogger A-List", Lapho ungathola khona uhlu oluhle lwezinhloko ezahlukene ezisebenzayo.
Isibonelo Esibi: Isikhumbuzo Se-Peanut Husk
Uzofuna futhi ukusebenzela ukungeza kwezinye izinto zezinhloko ezinhle, njengokuhlinzeka ngocingo ukuze usebenze, okubonisa ukuthi i-athikili kungokwenziwayo noma ukunikela ngenani lezinto ozozinikela ukusizaes umihana nj.
Ungesabi ukwenza uphondo lwakho futhi wenze abantu bazi nge-athikili yakho. Ngaphezu kokungeza isixhumanisi ku-Facebook post-Twitter, når du ønsker at bruge okulandelayo:
Bamba iqhaza kwamanye amabhulogi ngokushiya imibono. Noma kunjalo, ungavele uxhume ama-athikili akho njengoba lokhu kungabonwa njengobunama noma ngogaxekile abanye. Mane ungeze ulwazi onalo engxoxweni futhi uma kukhona indawo yokwengeza isixhumanisi, engeza. Uma kungenjalo, mange usebenzise igama lakho. Othile angaku-Google bese uthola ibhulogi yakho.
Ukunikezwa okuzoxoxwa kumasayithi akhangisa abantu ababhekiswe kuzo. Uma ubhulogi mayelana nama-sommerfugle, cela ukuxoxwa kwezinye amabhulogi wokulima noma ibhulogi ye-entomology.
Ngifunde kakhulu ukuthi yini eyenza isiza liphumelele, yini ebangela ukuba lifinyelele kahle kuGoogle futhi ngisebenzise amasayithi esikhundla seGoogle. I eyodwa wonke amasayithi aphezulu, amasayithi aphezulu womgwaqo afanayo ukuthi akhiqizi okuqukethwe okuhle kepha okuqukethwe okuhle. Esihlokweni esithi “Indlela Yokugubha Ibhulogi Yakho Futhi Yakha Ukufunda", Ngikhuluma ngalokho okwenzela okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu, kufaka phakathi izinto ezihlukile ongeke uzithole kwenye indawo futhi uhambe igxathu elingaphezu kwalokho okuhlinzekwa omunye umuntu, ikakhuluiszi umnc.
I "Imiyalo ye-5 Quick Copywriting yamabhulogi", Sina nawe amanye amasu ayisisekelo azokusiza ukuthi ubhale okuthunyelwe okuhle kwebhulogi okumele abafundi bakho bayithande futhi bayothanda ukwabelana nabo.